Aviar inogamuchira dzimwe nhau mune yayo yazvino kugadzirisa | IPhone nhau
Aviar inogamuchira dzimwe nhau mukuvandudzwa kwayo kwazvino
Aviary, kunyangwe yakarasikirwa nekumwe kuvapo kwayo, ndeimwe yeakanakisa maficha ane chekuita nekugadziriswa kwemifananidzo. Kunyangwe ichisanganisira akawanda akasiyana sarudzo dzekumisikidza, ine mushandisi interface iyo inobvumidza chero mushandisi kuishandisa uye kuzadzikisa mibairo yehunyanzvi. Uye zvakare, mushure mekuwanikwa kwayo neAdobe tawana inonakidza pasuru yenyaya nekuvandudzwa, Isu tinokuudza izvo zvitsva zvaunowana mune yazvino Aviary yekuvandudza. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve ino Adobe foto mupepeti yeiyo mobile vhezheni, isu tinokuudza nezvazvo.
Ichi chishandiso chinotibvumidza kugadzirisa ese akakosha maficha emifananidzo yedu, mukuwedzera, tisinga pinde mukati medu Adobe ID, ichatibvumidza kurodha nhevedzano yemapakeji uye mawedzero-anozokwidziridza ruzivo rwedu rwevashandisi muAviary imwe notch. Idzi ndidzo nhau dzatakagamuchira mune yazvino Aviary yekuvandudza:
Chii Chitsva muVhezheni 4.4.1
- Tenderedza uye utwasanidze ako mapikicha neyedu nyowani Shanduko chishandiso
- Chinja kucheka kana kuwedzera machena machena kumufananidzo wako usati waugovana pa Instagram
- Tsigiro yekushandisa 3D Kubata mune zvakatumirwa mune Ongorora chikamu uye muProfile
- Tsaona yakagadziriswa neMhedzisiro kusimba
Iko kushandiswa kuri mahara zvachose. Pakutanga, yaisanganisira kubhadhara kwakabatana, zvisinei, kubvira payakabatanidzwa neAdobe, inotibvumidza kurodha pasi zvachose mawedzera-ons emahara nekungopinda neAdobe ID yedu, saka usatambise mukana uyu. Iko kunyorera kunogara kuchivandudzwa, kunoshandurwa mumitauro isingaverengeke, ndeyepasirese uye inoenderana nemidziyo mushure meIOS 8.1 uye inorema 29 MB chete. Ini pachangu, ndiye mupepeti wandinoshandisa zvakanyanya kukurumidza kutora mafoto pane yangu nhare, yezvinhu zvinorema kana zvehunyanzvi zvinhu zvatakasarudza zvePixelmator.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Aviar inogamuchira dzimwe nhau mukuvandudzwa kwayo kwazvino
NASA neApple Music timu kumusoro kuzopemberera kusvika kwaJuno paJupiter
Apple inotangisa mana eanonyorwa emoji mapake eMessage, matatu acho seApple Watch